Chitayera Chebonde Chamakaba Kumbwa - Part 1 Chitayera Chebonde Chamakaba Kumbwa - Part 1
Chitayera Chebonde Chamakaba Kumbwa - Part 1
Doggy Style ndiyo imwe position inonanaka yekuita nayo bonde uye ndiyo imwe nzira iri nyore inokurumudzisa mukadzi kutunda nekunorova g spot. Pane kakukosha karipo kana uchikoirwa nekumashure zvekuti chimbwamupengo chiri mauri chinobuda even kuna Mufundisi wesangano chairo kkkkk.
Maitirwo Ayo: Unopfugama nemabvi nemaoko, kana kuti unoenda kumucheto wemubhedha wakafongora chihenge chese chakati nyena nekumashure, kana kuti munoenda mu bathroom wobata sink or tub wakafongora, murume ouya kumashure kwako akapfugama kana kumira opfekera sinhi musikarudzi NDAPOTA USAISA MUKADZI KUMANYOWA. Paanoipinza sinhi yose musikarudzi , yoti ndii anobata magaro omudzimai kuti akwanise kukoira ari steady achiita mberi shure. Iwewo mukadzi tenderedzawo chiuno chako uchikovira uchienderana ne rhythm yemurume.
Munogona kuchinja position iyi makadai mukadzi unokwanisa kurara facedown (uso hwakatarisa pasi), wakazvambarara pabed, makumbo ako wakaavhura sechigero chaicho iye murume okwira pamusoro pako oipfekera neshure sezvamunongoita wakafongora Kana murume wako ari munhu anoda kuedza zvakawanda, mukurudzire kuti aende mberi mberi kwe sikarudzi zvekuti mabhora emurume anenge achirova matinji kana kuti zibeans (gongo)
Nei uchida Kudaro: Chidziro chekumberi kwesikarudzi chiri sensitive chinonyerekedza nyore nyore, ndiko kusaka kuiswa sinhi nekumashure wakafongora kuchizipa kuvanhuadzi. Iye murume kana ari kumashure kwako ngaaone kuti ari kuedza kurova g spot yako. Kana asingazive pane g spot murakidze unomuti isa munwe wakananga kumusoro musikarudzi pane kanenge kagomba ikako ngaaedze kukajunga junga nesinhi isina kupinda yese and akaziva kamwena ikaka anenge akukukwira mhando yepamusoro zvekuti unotunda zvinokunwisa mvurawo newe, and kutunda kwacho i earthquake chaiyo unorasa njere kana kufenda nekunakirwa Iyewo murume anenge achiona sinhi yake ichipinda ichibuda, and anenge agara akatozvironga mumusoro make kuti nhasi ndoda kunomukwidza kumukwidza wenhapitapi nenzira iyi.
Chidzidzo Chikuru: Uri pakati pekuiswa ukaswinyanidza makumbo ako mukadzi kana kuacrosser kumabvi, sikarudzi yako inosunga kuti shwii seyemhandara. Kuti zvinyatsoita mutsindo wekunakirwa, kotamisa kumubhedha, zvoita kuti sinhi inyatsonyura yese. Mhai munoimba manhanga kutapira mukateerera ini tete venyu.